Posted by kelartha on Wednesday, October 5, 2011 / Labels: ဘဝတက္ကသိုလ်.....
မြတ်စွာဘုရားက မိန့်တော်မူထားတာတယ်လေ လောကကြီးက အားလုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါတွေအတွက် ဆရာတဲ့။ ဘုရားပြောတာလေးကိုပြောပြမယ်နော်။`““ လောကော သတ္တာန မာစေရော၊ အတ္ထာနတ္ထ ပဒဿကော`”” တဲ့။ `““ လောကကြီးဟာ သတ္တဝါတွေအတွက် အကျိုး အပြစ်ကို ညွှန်ပြနေတဲ့ ဆရာကြီးဖြစ်တယ်`”” ဆိုတာကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား။ နီတိကျမ်းတွေထဲမှာလည်း ဒီသဘောမျိုး ဆုံးမတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စာဏကျနီတိကျမ်းဆိုရင်- ခြင်္သေ့ဆီက သားကောင်ဖမ်းတဲ့အခါ ကြီးကြီး ငယ်ငယ် စွမ်းအားမလျှော့ဘူးဆိုတဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခုကို ယူရမယ်တဲ့။ “ ဗျိုင်းဆီက သူ ငါးဖမ်းတဲ့အခါ အာရုံ တခြားမပျံ့လွင့်စေဘဲ စူးစူးစိုက်စိုက် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် စောင့်ဖမ်းတဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခု ယူရမယ်တဲ့။ `“ ခွေးများဆီက အရှင်သခင်ရဲ့ အလိုကို သိတတ်ခြင်း၊ကျွေးသမျှနဲ့ ရောင့်ရဲခြင်း၊အိပ်လွယ်ခြင်း၊နိုးလွယ်ခြင်း၊အရှင်သခင်ကို ခယဆည်းကပ်တတ်ခြင်း၊ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ အတတ်ပညာ ခြောက်မျိုးကို ယူရမယ်တဲ့။ `“ မြည်းဆီက ဘယ်လောက် အလုပ် လုပ်ရလုပ်ရ မပင်ပန်းခြင်း၊အချမ်းအပူကို မမှုခြင်း၊ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း ဆိုတဲ့ အတတ်ပညာ သုံးမျိုးကို ယူရမယ်တဲ့။ “ ကျီးကန်းဆီက လျှို့ဝှက်တဲ့နေရာမှာသာ ကာမဂုဏ်ကို ခံစားခြင်း၊အရေးကြုံတဲ့အခါ စုပေါင်းညီညွတ်ခြင်း၊
ဘယ်တော့မှ မမေ့မလျော့ဘဲ ရန်သူက အငိုက်ဖမ်းလို့ မရအောင် နေခြင်း၊ မပျင်းမရိခြင်း ဆိုတဲ့ အတတ်ပညာ လေးမျိုး။ “ ကြက်ဖဆီက တိုက်ခိုက်တတ်ခြင်း၊စောစောထခြင်း၊တွန်ချိန်တန်ရင် တွန်ခြင်း၊ ဆွေမျိုးများနဲ့ အတူတကွ စားသောက်ခြင်း၊ကြက်မ ဒုက္ခရောက်ရင် ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အတတ်ပညာလေးမျိုး။ အဲဒါတွေဟာ တိရစ္ဆာန်များဆီက လူတွေ သင်ယူသင့်တဲ့ အတတ်ပညာတွေလို့ ညွှန်ပြထားတာ ရှိတယ်။ ညီလေး ညီမလေးတို့...........
`“ယူတတ်တဲ့ အသိဥာဏ် ရှိသူအတွက် သက်ရှိ သက်မဲ့ လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အတတ်ပညာစုံကို သင်ပြပေးနေပြီ အခကြေးငွေလည်း မပေးရ၊ အမြဲတမ်းလည်း ဖွင့်ထားတဲ့ တကယ့်တက္ကသိုလ်ကြီးပဲပေ့ါ။ ရှေးကနီတိကျမ်းတွေကိုပြုစုခဲ့တဲ့ ပညာရှိကြီးတွေဆိုတာလည်း လောကကြီးကပေးတဲ့ အတတ်ပညာတွေကို သူတို့က ယူတတ်တဲ့ဥာဏ်နဲ့ယူပြီး တစ်ဆင့်ညွှန်ပြပေးကြတာပဲပေ့ါ။ တစ်စက်တစ်စက်ကျတဲ့ ရေတွေကြောင့် အိုးကြီးပြည့်လာတာ၊ မြေကြီး တစ်မှုန့်ချင်းကိုစုပြီး ခြတောင်ပို့တွေ တည်တာကိုကြည့်ပြီး စီးပွားရေး၊ ပညာရေးအတွက် ညွှန်ပြခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင် လောကတက္ကသိုလ်ကြီး ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းသာကြည့်ပေ့ါ ညီလေး ညီမလေးတို့ရေ......။
အရှင်ကေလာသ(သာစည်) MA မဂဓ တက္ကသိုလ် အိန္ဒိယ။
လှမ်းလာခဲ့ပါမိတ်ဆွေ. ..လာကြည့်လှည့်ပါမိတ်ဆွေ.... လုပ်ကြည့်လှည့်ပါမိတ်ဆွေ. (1)
ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့ အခါတော် ဝါဆိုလမြတ်နှင့် ဝါကပ်သံဃာတော် (1)
အပြစ်မြင်ခြင်း မမြင်ခြင်း (1)
အသွင်သဏ္ဌာန် နှင့် အနှစ်သာရ (1)
အမေ ( ၁ ) (1)